एकपछि अर्को किन ह्याक हुँदैछन् नेपाली युट्युव च्यानल ? – Sandes Post
March 31, 2022 261
ह्याक कसरी भयो भन्ने कुरा हालसम्म बाहिर आइसकेको छैन । ह्याक गरिसकेपछि ह्याकरले सो च्यानलको नाम परिवर्तन गरेर ‘इथेरियम’ राखेका थिए ।
त्यसअघि चर्चित र्‍यापर भिटेनको युट्युव च्यानल ह्याक गरी ह्याकरले इथेरियम सम्बन्धी लाइभ स्ट्रिमिङ गरेका थिए ।
बेलाबखत ठूला-ठूला युट्यव च्यानल ह्याक भएको समाचार आइरहेको हुन्छ । यी ठूला कम्पनीहरूमा प्राविधिक टिमको सहभागिता हुँदा हुँदै पनि ह्याक हुने समस्या आइरहनु यसको गम्भीर पक्ष हो ।
युट्युव ह्याक प्रायः सबैको साझा समस्या जस्तै बनेको छ । समयमै यसबारे बुझ्न सकिएन भनेपछि ठूलो परिणाम भोग्नपर्छ । पछि रिकभर गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने मान्यता लियो भने च्यानल त रिकभर होला ।
कसैले त्यसमा भएका सम्पूर्ण भिडिओ डिलिट नै गरिदिन्छन् भने कतिले त्यसलाई लुकाएर राखेका हुन्छन् । यी सबै कुरा गर्नुकाे पछाडिको कारण हो, त्यो च्यानल ह्याक गरिएको जस्तो नदेखियोस् ।
ह्याक गरिसकेपछि उनीहरू आफूले राखेको नाम अनुसारका भिडिओ अपलोड गर्छन् । जसले गर्दा सब्सक्राइब गरेका च्यानललाई त्यो च्यानल ह्याक भयो भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन ।
ह्याक गरिसकेपछि ह्याकरहरूले ती युट्युव च्यानल, अकाउन्ट्स मार्केट डटकम, डार्क वेबजस्ता साइटमा बेच्छन् । वा आफ्नै तरिकाले गैरकानूनी कामहरू प्रवर्द्धन गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा कानूनी रूपमा ती युट्युव च्यानलका संस्थापकले धेरै कुरा भोग्नपर्ने हुन्छ ।
अब जानौं, ह्याकरले युट्युव च्यानल कसरी ह्याक गर्छन् भन्ने कुरा । ह्याकरहरू युट्युव च्यानल ह्याक गर्ने धेरै प्रकारका विधि अपनाउने गर्छन् । जसमा सबैभन्दा प्रभावकारी विधि सोसल इन्जिनियरिङलाई मानिन्छ ।
प्रायः ह्याकरहरू यही विधि अपनाएर च्यानल ह्याक गर्ने गर्छन् । सोसल इन्जिनियरिङ एउटा यस्तो माध्यम हो, जहाँबाट ह्याकरले प्रयोगकर्तालाई नै प्रयोग गरेर उनीहरूको संवेदनशील जानकारी लिने गर्छन् ।
ह्याकर युट्युवरको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुरूपका अफरहरू दिन भरपर्दो देखिने साइट निर्माण गर्छन् ।
युट्युवरलाई विज्ञापन दिने बहाना, उनीहरूको एप प्रचार गरिदिएबापत मोटो रकम दिने आश्वासन वा अन्य कुनै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर होस्, ह्याकरहरू प्रयोगकर्तालाई ईमेलमार्फत डेटा लिने लिंक पठाउँछन् र च्यानल कब्जामा लिन्छन् ।
कोही पैसाको प्रलोभनमा नपर्ने संस्था वा व्यक्तिको च्यानल ह्याक गर्नपरे उनीहरू त्यसबाहेकका अन्य उपाय अपनाउँछन् । विशेषगरी कसैको व्यक्तिगत च्यानल ह्याक गर्नपरे ह्याकरहरू उनीहरूको आफ्नो एपको प्रचार गरिदिए बापत मोटो रकम दिने आश्वासन देखाउँछन् ।
यदि एकपटक सो एप कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमा आइसकेपछि सो एपले प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण जानकारी जस्तै सेभ गरेका पासवर्ड, कुकिज सबै ह्याकरको डेटाबेसमा पठाउँछ ।
त्यसपछि ह्याकरले ह्याक भएका च्यानल रिब्राण्डको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । युट्युव च्यानल हाम्रै कारणले ह्याक हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनपर्छ । अनावश्यक लिंक खोल्नु हुँदैन ।
Prevबुढासुब्बाको युट्युब च्यानल ह्याक भएको झरना थापाले सबै भन्दा पहिला कसरी थाहा पाइन् ?
Next‘उज्यालो नेपालका नायक’ कुलमान घिसिङसँग कति छ सम्पत्ति ?